(၂၀၁၀ ကို ကြိုဆိုလျက်)
၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာ ၃၁
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, December 31, 20094comments:
အကြောင်းအရာက: ကဗျာ, အမှတ်တရ
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် ည ရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသောနှစ်များ
အင်း zox က ရေးဖို့ လာ Tag သွားတဲ့အတွက် မရေးရင်လည်း မကောင်း၊ ရေးပြန်ရင်လည်း မရေးတတ် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။ များများရေးရမလား နည်းနည်းရေးရမလား ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့နှစ်တွေက မနည်းတော့ဘူးလေ။ ဒီတော့ နိဒါန်း မစ၊ စာကိုယ်မရေး၊ နိဂုံးဘဲ ရေးလိုက်တော့မယ်နော်။ ကောင်းတယ်မလား။ လူလောကကို စပြီရောက်ပြီးသကာလ လူမှန်းသိတတ်စလို့ဘဲ ပြောရတော့မှာပေါ့။ ဒီလိုနေ့ရက်တွေဆို ပျော်ရွှင်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ငယ်တုန်းကတော့ အဲလောက်ကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ နည်းနည်းကြီးလာတော့ ယမင်းတို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ လူငယ်တွေစုပြီး လူကြီးတွေကို ဒုတ်ခပေး အဲ အကူအညီတောင်းတာပါ။ အတင်း အေးဓားပြတိုက် ပိုက်ဆံတောင်း၊ ပြီးရင် လမ်းလယ်ကောင်မှာ မီးဖို ဖို အမြဲတစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု လုပ်စားကြတယ်။ ငယ်တုန်းက လူကြီးတွေလုပ်တော့ ကိုယ်က ချက်ပြီးရင် စားချင်တာပေါ့။ သူတို့က အခု မစားရသေးဘူး။ New year အော်ပြီးမှ စားရမှာလို့ပြောတာနဲ့ ကလေးတွေစုပြီး happy new year လို့ ကုန်းအော်တော့တာပါပဲ။ ဒါကို လူကြီးတွေက ဟဲ့ ည ၁၂ နာရီထိုးမှ အော်ရမှာ ခု မအော်ရသေးဘူးလို့ပြောတော့ ကိုယ်တွေက အိပ်ချင်နေတာကိုး။ စားပြီးအိပ်မယ်ဆိုပြီး အော်တာပေါ့။ နောက်ပိုင်း အလုပ်ဝင်တော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ မပျော်ရတော့ဘူး။ ရုံးက ပွဲလုပ်တော့ အဲဒီပွဲမှာ တစ်ညလုံး အိပ်ငိုက် အဲ မှားလို့ ပျော်ရတော့တာပေါ့။ ဟိုးအရင် ရုံးတုန်းကတော့ အင်းယားနားက ခြံထဲမှာ လုပ်တယ်။ ပွဲမလုပ်ချင် အင်းယားကန်ဘောင်ပေါ် လျှောက်သွားလိုက်နဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ အဲ ပွဲကို မသွားခင် ရုံးမှာ လူစုပြီး ATT ကစားကွင်းမှာ သွားဆော့ပြီးမှ ပါတီပွဲကို သွားတာ။ ပြီးမှ ပွဲမှာ တစ်ညလုံး မဲနှိုက်၊ သီချင်းဆို၊ မီးပုံပွဲနဲ့ ၁၂ နာရီထိုးခါနီးကျရင် အားလုံး မတ်တတ်ရပ်ပြီး နာရီသံ နားထောင်ပြီး အော်ရတာ အပြင်က ဖြတ်သွားတဲ့သူတွေကလည်း တွေ့တဲ့သူတိုင်း လှမ်းအော်နှုတ်ဆက်ကြသေးတယ်။
အင်း ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ရှိုးပွဲကြည့်ပြီးတော့ ကစားသေးတယ်။
ကစားတာက ဘာမှမဟုတ်ဘုး။ ဟိုဘက်ဒီဘက် အနိမ့်အမြင့်ကို စီးတာလေ။ ပြောရဦးမယ်။ ယမင်းနဲ့ စီးတဲ့သူက
၀တယ်လေ။ သူက ထိုင်လိုက်တော့ ယမင်းဘက်က မိုးပေါ်ထောင်သွားရော ဒါနဲ့ နောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လာဖိပေးမှ စီးလို့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ဟဲဟဲ ဒါကို သူငယ်ချင်းက ဒီပြင်ဟာ ဆော့တဲ့ သူ မဖိပေးတော့ဘူးတဲ့။ လာဖိပေးတော့ သူက မဆော့ရဘူးတဲ့။ ဒါန်းစီးပါလားတဲ့။ ဒါနဲ့ လွှဲပေးမလား မေးလိုက်တာပေါ့။ လွှဲပေးမှ စီးလို့ကောင်းတာလေနော်။ သူက ဘာမှမလွတ်ပါလားဆိုပြီး လွှဲပေးရှာပါတယ်။ ဒီလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းရထားတာ နင်တို့ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်မလား။ ၁၀ နာရီထိုးလည်းကျရော ပိတ်ပါလေရော။ ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာစုပြီး စားကြသောက်ကြနဲ့ တစ်ညလုံး မအိပ်ကြေးလုပ်ကြတယ်။ ဒီနှစ်တော့
ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရင် ကောင်းမလဲဆိုတာ အကြံပေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုရင်း နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကူးတဲ့နေ့မှစ၍ အားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး ဥာဏ်ပညာများ ဒီ့ထက် ဒီ့ထက် တိုးတက်အောင်မြင်ပြီး ယမင်းဆီ အမြဲလာလည်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမိပါတော့တယ်။
(မောင်လေး zoxရေး ... ရင်ထဲရှိတာတွေ အကုန်ချရေးရင် တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်ဖြစ်မှာစိုးလို့ အနှစ်တွေဘဲ ရင်ဖွင့်လိုက်ပြီနော်။ ခုလို ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိပါတယ်။ တို့ ဘလောဂ့်မောင်နှမတွေ ရေစက်ရှိနေဦးမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်မိပါတယ်။)
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, December 31, 2009 No comments:
မိုက်သည် ရက်စက်ပြုမူလိမ်ညာနေလည်း အပြုံးမပျက် မေတ္တာဖက်လျှက်
ရေချိုးဖို့ ရေနွေးကြိုပေးတာလည်း အမေ။ ဒီအမေ
ဒီရင်ခွင်နွေးထွေးစွာနေထိုင်ရင်း မပျောက်မကွယ် အမြဲခိုလုံခွင့်ပေးလျှက်ပါ
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, December 30, 20092comments:
Yangon Expo 2010 ကျင်းပမည်
၂၀၁၀ ခုနှစ်၏ ပထမအကြိမ် Yangon Expo 2010 ကုန်စည်ပြပွဲအား ဇန်န၀ါရီလ ၈
ရက်မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့တပ်မတော်ခန်းမတွင်
ပြပွဲတွင် အထွေထွေလူသုံးကုန်များဖြစ်သော အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊
အလှကုန်နှင့် အသားရေထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ အမျိုးသား၊
အမျိုးသမီးအ၀တ်အထည်နှင့် ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ပြည်တွင်း၊
ပြည်ပဆေးဝါးများ၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသုံးပစ္စည်းများ၊ စာရေးကိရိယာများ၊
မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများ၊ အိမ်/ရုံးသုံးပရိဘောဂများ၊
ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ၊ စက်မှုဇုန်ထုတ်ကုန်များ၊ မီးစက်နှင့်
အထွေထွေအသေးစားနှင့် အလတ်စားပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်ဆိုင်များနှင့်
အခြားလူသုံးကုန်မျိုးစုံအား အထူးလျှော့ဈေးများ၊ မေတ္တာလက်ဆောင်များ၊
ကံစမ်းမဲများ၊ အရစ်ကျငွေချေစနစ်များဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရ သည်။
ပြပွဲတွင် ပြခန်းပေါင်း ၁၇၀ ကျော်ဖြင့် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိ
ပြပွဲတွင်ဝင်ရောက်ပြသလိုသူများအနေဖြင့် Smart Business Group ဖုန်း-
၆၆၃၈၃၇၊ ၀၉၅၀၉၉၀၇၉ နှင့် ၀၉၈၆၂၀၆၀၀ သို့
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, December 29, 2009 1 comment:
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီသည် ကျိုက်ထိုနယ်ရှိ အရှေ့ရိုးမတောင်တန်း
အ၀င်အပါဖြစ်သော ပေါင်းလောင်းတောင်ပေါ်မှာ တည်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ
တန်ခိုးကြီးတဲ့ စေတီတစ်ဆူဖြစ်ပါတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီကို အစွဲပြုပြီး
စေတီတည်ရှိတဲ့တောင်ကိုလည်း ကျိုက်ထီးရိုးတောင်လို့ ခေါ်ကြတယ်။၊
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတည်ရှိရာ တောင်ထွတ်မှာ ပင်လယ်ပြင်မှ ပေ ၃၆၀၀ ခန့်
မြင့်ပါတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ တည်နေပုံမှာ
ကျောက်ဆောင်တစ်ခုရဲ့အစွန်းမှာ လုံးပတ် ပေ ၅၀ ခန့်ရှိသော
ဦးခေါင်းပုံသဏ္ဍာန် ကျောက်လုံးကြီး တစ်ခုက ပြုတ်လုတည်းကာတင်နေတာကို
တွေ့ရတယ်။ အဲဒီကျောက်တုံးကြီးပေါ်တွင်မှ—ဥာဏ်တော် ၁၅ ပေခန့် မြင့်သော
စေတီတော်ကို တည်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ပြီးတော့ စေတီတည်ရှိရာ ကျောက်ဆောင်နှင့်
ရင်ပြင်တော်ကို ချောက်တစ်ခုခြားနေပြီး သံတံတားငယ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားတာကို
တွေ့ရပါတယ်၊ စေတီတည်ထားရာ ကျောက်တုံးကြီးဟာ လူတစ်ယောက်
တွန်းလိုက်ရုံနှင့် လှုပ်ရှားသွားတာတွေ့နိုင်တယ်။ ထိုကျောက်တုံးကို
ဆွဲယူနိုင်လို့ရတယ်။ ဗုဒ္ဓဥာဏရသေ့သည် ဆံတော်ဓာတ် ၃ ဆူကို
မပျောက်မပျက်ရအောင် သူရဲ့ဆံကျစ်အတွင့်း စည်းနှောင် ထားခဲ့တယ်တဲ့။
နောက်နှစ်ကာလ အတန်ကြာလတ်သော် အနာရောဂါ နှိပ်စက်သဖြင့် ရသေ့ကြီးဟာ အင်း
ငါကွယ်လွန်ခဲ့သော် ဒီဆံတော်ဓာတ် ၃ ဆူကို မည်သို့မည်ပုံ
ထားခဲ့ရပါမည်နည်းဟု တွေးတော ပူပန်ခြင်း ဖြစ်မိခဲ့တယ်တဲ့။၊ ထိုအခါ
သိကြားမင်းက လူ့ပြည်ကို ဆင်းသက်လာပြီ။ ရသေ့ကြီးရဲ့ ဆနအတိုင်း
ရသေ့ကြီးဦးခေါင်းနှင့်တူတဲ့ ကျောက်တုံးကို ရှာဖွေပြီး ကျောက်တုံးထဲကို
သန်လျက်နှင့်ထွင်း၊ ဆံတော်တစ်ဆူကို ဌာပနာခဲ့တာတဲ့၊ ထို ကျောက်တုံးပေါ်မှာ
တည်ထားသောစေတီကို မွန်ဘာသာအားဖြင့် ကျိုက်အိသိရိုး မြန်မာဘာသာဖြင့်
ရသေ့ရွက်သောဘုရားဟု ခေါ်တွင်စေတယ်၊ နောင်ကာလ ကြာလတ်သော် ကျိုက်အိ သိရိုးမှ
ကျိုက်ထီးရိုးဟု စကားရွေ့လျောလာခဲ့တာ ဆိုဘဲ၊ အဲ ကျန်ဆံတော် ၂ ဆူကိုလည်း
သိကြားမင်းက ဒိုးခလွန်တောင်နှင့် ကုသိနာရုံတောင်များမှာ အသီးအသီး
ဌာပနာပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် သမိုင်းများတွင် ဆိုသည်၊ ထိုစေတီများမှာ
ကေလာသနှင့် ကုသိနာရုံဟု ထင်ရှားပါတယ်၊ ကျိုက်ထီးရိုးရင်ပြင်တော်မှ
မြင်ရတဲ့ ရှုမျှော်ခင်းမှာ အလွန်သာယာပါတယ်၊ ကြည်နူးဖို့လည်း ကောင်းတယ်။
ပြီးတော့ အနောက်ဖက်ကို မျှော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် စစ်တောင်းမြစ်ကို
ကျော်လွန်ပြီ ပဲခူးရွှေမော်ဓော စေတီတော်ကို ဖူးမြင်နိုင်ပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်ပေါ်တက်ဖို့ လမ်း ၂ လမ်းရှိတွေ့ရပါတယ်၊ တစ်လမ်းက
စစ်တောင်းရွာမှ တက်ရတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်လမ်းကတော့ ကျိုက်ထိုမြို့ကနေ
မော်တော်ကားလမ်းဖြင့် ၉ မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ ကင်မွန်းစခန်းခမှ တက်ရတဲ့လမ်း
ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒုတိယလမ်းမှာ ဘုရားဖူးအများ အသုံးပြုတဲ့လမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်မွန်းစခန်းမှ ကျိုက်ထီးရိုး ရင်ပြင်တော်အထိ ၇ မိုင်ခွဲခန့်ရှိပြီး
စခန်းပေါင်း ၂၇ ခုကို ဖြတ်ကျော်သွားရပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးပွဲတော်အချိန်မှာ နှစ်စဉ် တပို့တွဲလကနေ တန်ခူးလအထိ
ကျင်းပပါတယ်။ ပွဲတော်အချိန့် မြန်မာနိုင်ငံ အရပ်ရပ်က ထောင်သောင်းမကသော
ဘုရားဖူးများ လာရောက်ကြတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။၊ ဘုရားသို့တက်ရာ
လမ်းတစ်လျောက်မှာ ဘုရားဖူးများ နားနေတည်းခိုရန် ရေမြောင်ကလေး။
ရွှေရင်ဆို့၊ ကင်ပြွမ်းပင်၊ ရေမြောင်းကြီး၊ ဘိုးပြန်တောင်၊ စိုင်တမော့
အစရှိတဲ့ စခန်းများ၊့ ဈေးဆိုင်များကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။
ကင်းမွန်းစခန်းမှာဆိုရင် ဘိုးဘိုးကြီးနတ်နှင့် ဟုံးနတ်စင်များ ရှိပြီး
လမ်းခရီးမှာ မျှော်တော်ယောင်စေတီ၊ လွမ်းစေတီ၊ ကျောက်သမာန်
စေတီငယ်များနှင့် ရွှေနန်းကျင်နတ်၊ ပန်တင်နတ် စသော နတ်ကွန်းများကို
တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်၊ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သူနှင့် အိုမင်းမစွမ်းသူတို့ကတော့
အထမ်းပုခက်များစီးပြီး တက်ကြတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ တချို့ကြတော့
ပိုက်ဆံရှိလို့ တက်ကြတာလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားဖူးများဟာ
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကတစ်ဆင့် မုဆိုးဘုရား။ ဖားဘုရား၊ နဂါးဘုရားများကို
ဖြတ်ကျော်ပြီး ၄ မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ ကျောက်ထပ်ကြီးဘုရားကိုလည်
သွားလို့ရတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုးရင်ပြင်ပေါ်မှာ ဘိုးဘိုးကြီး နတ်ရုပ်နှင့်
ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားမြောက်ဘက်မှာတော့ ကျီးကန်းပါးစပ်လို့လည်းခေါ်
ကျောက်ဂူနေရာတို့မှာလည်း သွားပြီး ဆုတောင်းဓိဋ္ဌာန်ပြုပြီး အမွေးနံ့သာ
ပက်ဖြန်းပြီး ပိုက်ဆံပစ်ထည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်လို့ ရတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အင်း လျှောက်သွားရရင်တော့ သွားရမဲ့နေရာတွေက အများကြီးပဲ ပျော်စရာလည်း
ကောင်း၊ ကြည်နူးစရာလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ယမင်းလည်း ၂ ခေါက်ဘဲ
ရောက်ဖူးပါသေးတယ်။ ပထမတစ်ခေါက်ကတော့ တော်တော်ကို အဆင်မပြေပါဘူး။
လပြည့်နေ့လည်း ဖြစ်၊ လူတွေကလည်းအရမ်းများတော့ တည်းခိုခန်းကနေ သိပ်ပြီး
မလည်ဖြစ်ပါဘူး။ မိသားစုနဲ့သွားတာဆိုတော့လည်း ပျော်တာပါဘဲ။ အဲ
နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားရတာဆိုတော့ ပိုပြီး
ပျော်တာပေါ့။ ပြီးတော့ မှတ်မှတ်ရရ နှစ်သစ်အကူးမှာ သွားဖြစ်ခဲ့တာလေ။
နှစ်သစ်အကူးကို တောင်ပေါ်မှာ ကျင်းပခဲ့ရတာဆိုတော့ ပျော်ဖို့
အရမ်းကောင်းတယ်။ တစ်ညလုံး မအိပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ မနက်ကြတော့လည်း ပန်းကပ်၊
ဆီမီးကပ်နဲ့ဆိုတော့ ပြီးတော့ ရွှေသင်္ကန်းကပ်ဖို့ ကြတော့ ပါလာတဲ့
ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းကို သွားကပ်ခိုင်းရတယ်။ အင်း အဲဒီမှာ အတွေးတစ်ခု
ခေါင်းထဲရောက်လာတယ်။ ဘာလို့ ယောက်ျားလေး မဖြစ်ခဲ့ရတာလဲလို့ပေါ့။
ဒါပေမဲ့လည်း ရောက်နေတဲ့ဘ၀ကိုလည်း စိတ်ပျက်လို့ တွေးမိတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကျင့်ကြံနိုင်ရင် တစ်နေ့တော့ အောင်မြင်မှာပဲလို့
စိတ်ကို ဖြေသိမ့်ခဲ့တယ်လေ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း တစ်နှစ် တစ်ခေါက်တော့
မှန်မှန်သွားနိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ စိတ်ကူးရှိခဲ့တယ်။ မိတ်ဆွေတို့ကော
ရောက်ခဲ့ပြီးကြပြီပေါ့နော်။ ဒီတစ်ခါသွားရင် ပြောဦးနော်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Monday, December 28, 20093comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, December 27, 20093comments:
(ခုတက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့ ၇ ယောက်အတွက်)
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, December 27, 2009 No comments:
၀င်ပါ နားပါ မိုးခိုပါလှည့်...
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Friday, December 25, 2009 No comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, December 24, 20093comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, December 23, 20094comments:
တစ်ခါက လင်မယားနှစ်ယောက် စကားအချေအတင်ပြောကြသတဲ့။ အဲ ယောက်ျား ဖြစ်သူက computer crazy၊ မိန်းမဖြစ်တဲ့သူကတော့ ဒီယောက်ျား ငါ့ကိုတော့ ကွန်ပျူတာလောက် အလေးမထားဘူးဆိုပြီး စကားနာထိုးတဲ့ စကားစစ်ပွဲတစ်ခု ဖန်တီးတဲ့အကြောင်းအရာလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ... သူတို့ နှစ်ယောက်ပြောတဲ့ စကား တွေကို ကြည့်ကြပါဦးနော်။
မိန်းမ။ ။ ကျွန်မကို crazy အင်္ကျီလှလှလေးဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီး အခု မမှတ်မိတော့ဘူးလား။
ယောက်ျား။ ။ Bad command or file name
မိန်းမ။ ။ ရှင်နဲ့ ကျွန်မ ရုပ်ရှင်အတူတူ သွားမကြည့်တာလည်း ကြာပြီ။ ဒီကွန်ပျူတာ ရှေ့မှာပဲ အချိန်ဖြုန်းနေတာပဲ။ ဒါပဲနော် နောက်တစ်ပတ်ကျရင် ရုပ်ရှင်သွားကြည့် ကြမယ်။
ယောက်ျား။ ။ Drive not ready
မိန်းမ။ ။ ထမင်းလက်ဆုံမစားရတာလဲ ကြာပြီ။ လင်မယားဆိုတာ ထမင်း အတူတူစားတော့ ပိုစားဝင်တာပေါ့။
ယောက်ျား။ ။ Access denied
မိန်းမ။ ။ ကျွန်မအမေကတောင် ယောက်ျားအပေါ်မှာ ဒီလောက် အလျှော့ ပေးရမလားဆိုပြီး ကျွန်မကို ဆူနေပြီ။
ယောက်ျား။ ။ Divide Over Flow
မိန်းမ။ ။ ရှင်စဉ်းစားကြည့်စမ်း။ ကျွန်မတို့ အိမ်ထောင်သက် ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲဆိုတာ။
မိန်းမ။ ။ ကဲ အခုဆိုရင် ကျွန်မအမေ၊ ရှင့်ယောက္ခမက ရှင့်ကို အနိုင်ယူတဲ့ နည်းလမ်း တွေသင်ပေးဖို့ ကျွန်မတို့အိမ်ကို ၂ လ ၃ လ လောက် လာနေမယ်တဲ့။
ယောက်ျား။ ။ Insufficient disk space
အဲဒီအချိန်မှာ မိန်းမက အရမ်းစိတ်ဆိုးသွားပြီး အနားမှာရှိတဲ့ ပန်းကန်နဲ့ ယောက်ျားကို လှမ်းပစ်လိုက်ရာ နဖူးသို့ တိုက်ရိုက်ထိလေတော့သည်။ ဒီအချိန်မှာ ယောက်ျားက
Now Save to turn off your computer လို့ အားရပါးရအော်ပြီး လဲကျသွားပါလေတော့သည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်က ဖတ်ရှုခဲ့မိသော စာအုပ်တစ်အုပ်မှ တင်ပြအပ်ပါသည်။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ထူးချွန်သော ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ရာသည် မည်သည့်ပြဿနာများ၊ မေးခွန်းများကိုမဆို ပြန်လည်ဖြေကြားပေးနိုင်မည့် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ပူးပေါင်းတည်ဆောက်လျက်ရှိကြသည်။
နောက်ဆုံးတွင် အောင်မြင်စွာ တည်ဆောက်ပြီးသွားဖြင့် ပညာရှင်များအားလုံးသည် ၀မ်းသာကျေနပ်လျက်ရှိသည်။ သို့နှင့် ပညာရှင်များထဲက တစ်ယောက်က ၄င်းတို့ တည်ဆောက်ထားသော ကွန်ပျူတာစက်ကိုဖွင့်ကာ ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းကို မေးလိုက်သည်။
``ဒီကမ္ဘာကြီးကို မည်ကဲ့သို့ တည်ဆောက်ထားပါသလဲ``
ထိုအခါ ကွန်ပျူတာစက်သည် အသံမြည်ကာ အလုပ်လုပ်လျက် ကွန်ပျူတာမော်နီတာပေါ်တွင်လည်း အလင်းရောင်များ တဖျပ်ဖျပ် လင်းလာကာ အဖြေကို ဖြေပြထားသည့် စာသားပေါ်လာသည်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရလေသည်။
``သမ္မာကျမ်းစာ ကမ္ဘာဦးကျမ်းတွင် ဖတ်ပါ``
`ကျွန်တော် လူတစ်ယောက်လို ကွန်ပျူတာတစ်လုံး တီထွင်ထားတယ်` ဟု ကွန်ပျူတာပညာရှင်တစ်ဦးက သူ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကို ပြောပြလျက်ရှိသည်။
``ဒါဖြင့် ခင်ဗျားကွန်ပျူတာက လူတစ်ယောက်လို စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တာပေါ့``
`လူလိုတော့ မစဉ်းစား မတွေးခေါ်တတ်သေးဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာက အခြားကွန်ပျူတာတွေ အမှားတစ်ခုလုပ်မိရင်တော့ အပြစ်တင်တတ်ပါတယ်´
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, December 20, 20092comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, December 20, 2009 1 comment:
အလောင်းတော်ကဿပ ပင်မလမ်းဖြစ်သော ရွှေဆံပင်လမ်းနှင့် ရွှေဆံပင်တံတား
မြန်မာအမျိုးသမီးတို့၏ စေတနာစွမ်းအား "ရွှေဆံပင်တံတား"
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာခရိုင်၊ ပုလဲမြို့နယ်နှင့်
ယင်းမာပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ လည်ငေါက် - ချင်ပြစ် လမ်းမကြီးသည်
အလောင်းတော် ကဿပသို့ ဘုရားဖူးသွားရာလမ်းနှင့် အမေရေယာဉ် နတ်နန်းသို့
သွားရာလမ်းလည်း ဖြစ်သလို ရွာပေါင်း ၆၀ ကျော်နှင့် လူဦးရေ ၅၀၀၀၀
ကျော်တို့ မှီခိုအားထားရသော လမ်းမကြီးလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤလမ်းမကြီးနှင့် တံတားများပျက်စီး ယိုယွင်းမှုတို့ကြောင့်
ဘုရားဖူးခရီးသွားများ စိတ်ပျက်ကြရသလို ဒေသခံနယ်သူနယ်သားများလည်း
မိုးတွင်းရောက်တိုင်း ဒုက္ခမျိုးစုံနှင့် ကြုံတွေ့နေကြရပါသည်။
အထူးအားဖြင့် အရေးပေါ်ဆေးရုံတက်ရမည့် ဝေဒနာကြုံခဲ့လျှင် ကားမောင်းမရသဖြင့်
(စောင်ပုခက်များပေါ်တင်ကာ) ခြေလျှင်တစ်မျိုး၊ လှည်းဖြင့်
တစ်ဖုံဒုက္ခမျိုးစုံနှင့် ပင်ပန်းခက်ခဲစွာ သွားလာနေကြ၍ မသေသင့်ပဲ
သေဆုံးခဲ့ကြသည်မှာ လမ်းတံတားကုသိုလ်ရှင်များကို အသေခံ၍
လမ်းတံတားကုသိုလ်ပြုရခြင်းသည် အသက်ပေါင်းများစွာ ကယ်တင်ရသည့် ဇိဝိတဒါန
ကုသိုလ်ထူးကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကုသိုလ်ထူးကြီးကို ဆရာတော်များ ဦးဆောင်၍
နေ့မအားညမနား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ (၂)နှစ်ကာလအတွင်း စေတနာရှင်များ၏
အလှူတော်ငွေ ကျပ်သိန်းပေါင်း(၁၀၀၀)ကျော်နှင့် အတူ ဆံပင်ကုသိုလ်ရှင်
မြောက်များစွာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြိး ကျောက်လမ်း(၉)မိုင်နှင့် တံတား(၉)စင်း
ကျန်ရှိနေသော လမ်းပိုင်းနှင့် တံတား(၈)စင်းကို ဆရာတော်များကိုယ်တိုင်
အနီးကပ်ကြီးကြပ်၍ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပြီး မူလက တံတားကြီးတစ်စင်းကိုသာ
``ရွှေဆံပင်တံတား´´ ဟု ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း အမျိုးသမီးများ၏
စေတနာထက်သန်မှုတို့ကြောင့် ဤလမ်းမကြီးကို ``ရွှေဆံပင်တံတားလမ်း´´ဟု
မြန်မာအမျိုးသမီး များ၏ စေတနာစွမ်းအားကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် သမိုင်းဝင်
မော်ကွန်းထိုးသွားမည်ဖြစ်ပါ၍ ကမ္ဘာတွင် တစ်ခုတည်းသော
မိမိတို့အမြတ်တနိုးထားသည့် ဆံပင်ကို လမ်းတံတားခင်းလှူဒါန်းခြင်းသည်
စွန့်ခြင်းကြီးငါးပါးထဲတွင် ``အင်္ဂပရစ္စာဂ´´၊ ပါရမီသုံးပါးတွင် ဒါနဥပပါရမီ
မြောက်ပြီး ပါရမီဓာတ်ခံရင့်သန်မှုရှိသူများသာ လှူဒါန်းခွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရွှေဆံပင်လမ်းတံတားပေါ်အများသူငါ ချမ်းသာစွာ သွားလာနေသ၍
ရွှေပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ပါရမီကောင်းမှုအတွက် ကိုယ်အားဥာဏ်အား
စွမ်းနိုင်ရာ အားတို့ဖြင့် ပါဝင်ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြရန်
အရှေ့ဝါယာလက် (၂) လမ်း၊ ကမ္ဘာအေး မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
ဖုန်း - ၆၅၁၇၇၉၊ ၀၉-၅၁၂၁၈၉၁
ဗထူးလမ်းမကြီး (၄၂) ရပ်ကွက်
ဖုန်း - ၇၀၈၄၀၃
၃။ အရှင် ရာဇိန္ဒ
အမှတ် (၆)၊ အာဇာနည်လမ်း၊ ရွှေတိဂုံဘုရားအရှေ့မုခ် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Wednesday, December 16, 2009 1 comment:
အလွမ်းကဗျာလေး က တော်တော်ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ်။ ခံစားချက်လေးကို
လေးစားပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ တစ်ခုတဂ်ပါမယ်။ အိမ်လွမ်းသူ ဆိုတဲ့
ဆိုလာတော့လည်း မအားတဲ့ကြားက ရေးတော့ ပေးလိုက်တယ်နော်။ မကြိုက်ရင်လည်း
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, December 15, 20092comments:
ရင်မှာလေ နွမ်း၊ မင်းကိုလွမ်း၏။
ရင်မှာလေ တမ်း၊ မင်းကိုလွမ်း၏။
ရင်မှာလေ ချမ်း၊ မင်းကိုလွမ်း၏။
ငါ့မှာလေ လန်း၊ မင်းကိုလွမ်း၏။
ရာသီချိန်ပြောင်း၊ နှစ်တွေလည်း ဟောင်း
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, December 13, 20095comments:
ကျောင်းရဲ့အဆောင်ဘေးက အပင်ကြီးတစ်ပင်လေ... မိန်းထဲက အပင်တွေတိုင်းက ကဗျာဆန်ပြီး အရမ်းလှတယ်။ အေးချမ်းလည်း အေးချမ်းတယ်။ ခုစာသင်ဆောင်ဘေးက အပင်ကြီးပေါ့။ ဘာပင်လဲဆိုတာ မှန်မှန်ပြောပြခဲ့နော်... အဖြေသိချင်လား...
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, December 13, 2009 1 comment:
ဒီနေ့ ဒီလိုနေရာကို ပြန်ရောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မထင်မိဘူး။ သင်တန်းစတက်ဖို့ မိန်းထဲရောက်တော့ နင်တို့ကို သတိရမိတယ်သိလား။ နင်တို့ ပါရင် သိပ်ကောင်းမှာနော်။
ငါတို့ပျော်ခဲ့ဖူးတဲ့နေရာလေးတွေ ငါ တစ်ယောက်ထဲ ပြန်လျှောက်ရတော့မှာပါလားဆိုပြီတော့လေ.... ဒါနဲ့ ဒီနေ့ စတက်ရတဲ့နေ့ပေါ့။ သင်တန်းက
မနက် ၇ နာရီလို့ ပြောလို့ အစောကြီးထပြီး သွားရတော့ ပထမဆုံး အဓိပတိလမ်းကို စ၀င်တာနဲ့ အရင်က ပျော်ခဲ့တဲ့နေရာတွေ တစ်ယောက်ထဲ လျှောက်နေရင်းနဲ့ ရင်ထဲမှာ ၀မ်းလည်း ၀မ်းသာမိသလို ၀မ်းလည်းဝမ်းနည်းမိတယ်။ ၀မ်းသာတယ်ဆိုတာ တစ်ချိန်က ကျောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့နေရာလေးကို ပြန်လျှောက်ရလို့၊ ၀မ်းနည်းတာကတော့ သူငယ်ချင်းတွေအတူပျော်ခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာ ငါ တစ်ယောက်ထဲ လမ်းလျှောက်ရလို့လေ။ တစ်ယောက်ထဲလျှောက်တော့ အဓိပတိလမ်းက တော်တော်ရှည်ပါလားလို့ ခံစားမိပြန်ရော။ ငါတော့ ဒုက္ခပဲ တစ်နှစ်လုံး တစ်ယောက်ထဲ ဒီလိုသာ လျှောက်ရရင် မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် နေရာဟောင်းလေးက နွေးထွေးစွာ လက်ကမ်းကြိုနေတယ်။ ဒါနဲ့ တစ်ယောက်ထဲ သုတ်သုတ် သုတ်သုတ်လျှောက်လာရင်း သစ်ပုတ်ပင်ဘက်မရောက်ခင် သင်တန်းကျောင်းဆောင်ကလို့ ပြောထားလို့ ဟိုငေး ဒီငေးနဲ့ ကွေ့လိုက်တော့ ရှေ့မှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက် လှုပ်လှုပ် လှုပ်လှုပ်နဲ့သွားနေတယ်။ ဒါနဲ့ ရှေ့ကို လျှောက်တော့ ရေစင်ပဲ တွေ့တော့တယ်။ ဒါ့နဲ့ ကောင်မလေးကို လှမ်းခေါ်လိုက်ပြီး ကိုယ့်ထက် ငယ်မငယ်တော့မသိဘူး အမလို့ပဲ ခေါ်ပြီး မေးလိုက်တော့ သူလည်း လာတက်တာတဲ့။ အတော်ပဲ အဖော်ရသွားပြီ။ ကျောင်းရှေ့ရောက်တော့ သော့တောင်မဖွင့်သေးဘူး တက်မယ့်သူတွေက ငုတ်တုတ်တွေထိုင်နေတယ်။ တော်တော်ကြာတယ် စောင့်ရတာ ဘယ်သူမှလည်း လာမဖွင့်ဘူး။ တော်တော်ကြာတော့ အောက်ထပ် တံခါးလာဖွင့်တယ်။ ပြီးတော့ အပေါ်ထပ် တံခါးကတော့ လာမဖွင့်ဘူး။ တော်တော်ကြာတယ်။ အကုန်လုံးလည်း လှေကားတွေမှာ ထိုင်နေလိုက်ကြတာ။ ခုန ရတဲ့သူငယ်ချင်းကောင်မလေးတွေက အမ မညောင်းဘူးလား လာထိုင်တဲ့ သမီးတို့ရှေ့မှာ လာထိုင်ဆိုလို့ ဘယ်မှာများ ထိုင်နေလဲလို့ ကြည့်လိုက်တော့ လှေကားထစ်တွေမှာ အစီအရီထိုင်နေကြတယ်။ ခဏနေတော့ ဦးဆောင်ပြီး ဗိုက်ဆာပြီ မုန့်သွားစားကြမယ် လောဆော်ပြီး ရှေ့ဆုံးကနေ ကျောင်း ၄ ထပ်ဆောင်အပေါ်ကနေ ဆင်းလာလိုက်တော့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ စတက်ရတဲ့ ကျောင်းအတွက် ပျော်မိပါတယ်။ ကိုယ်သင်ချင်တာလည်း သင်ရသလို သူငယ်ချင်းအသစ်တွေလည်းရ အဟောင်းတွေနဲ့လည်း ပြန်တွေ့ဆိုတော့ ကျောင်းက ဆရာအဘိုးပြောတဲ့ နည်းကိုလည်း မကျင့်ကြံမိအောင် တစ်နှစ်လုံး ကြိုးစားသွားရမှာလို့လည်း ခံယူထားမိတယ်လေ။ သူက ပ လေးလုံး မဖြစ်စေနဲ့တဲ့။ ပ - သူငယ်ချင်းမရှိလို့ ကျောင်းတက်ရတာ ပျင်းတယ်။ ပ- သူငယ်ချင်းရလို့ ကျောင်းတက်ရတာ ပျော်တယ်။ ပ- သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် ပျက်သွားတာ မဖြစ်စေနဲ့။ ပ-သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ကျောင်းပြေးတာတွေတဲ့။ ရှောင်ရမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဓိပတိလမ်းကို ပြန်လည်ခြေချခွင့်ပေးတဲ့ ကံကြမ္မာရယ်၊ အလုပ်က ခွင့်တစ်ရက်ပေးတာရယ်၊ နောက်ပြီး သင်တန်းအတွက် အခက်အခဲဖြစ်တာကို ကူညီတဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းရယ် အားလုံးကို အမြဲ ကျေးဇူးတင်နေမိပါနော်။ အဓိပတိရယ်၊ သစ်ပုတ်ပင်အိုရယ်၊ ဂျပ်ဆင်ရယ်၊ ပုဂံလမ်းလေးရယ် အရာအားလုံး ပြန်လည်ကြည့်တော့လည်း သူတို့က အရင်အတိုင်းပါပဲ။ ပြောင်းလဲံသွားတာတွေက ပုထုဇဉ်လူသားတွေပါပဲလေ.... အဲ ခုတော့ ရွှေတိဂုံဘုရား တံမြက်စည်းလှည်းဖို့ ပြေးတော့မယ်။ နောက်ကျနေလို့နော်။
(ကျောင်း ၄ နှစ်တွင် အတူတက်ခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းမောင်နှမ အယောက် ၂၀ ကို သတိရခြင်းများစွာဖြင့်)
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, December 12, 2009 1 comment:
မဲ့ရွဲ့လို့ မြင်ကာ ကြည့်စေ
(နင်ရယ်… တို့ကတော့) မိုးခါးရေမသောက်….။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, December 10, 20093comments:
Focuses selection to the first icon on the notification area, use arrow keys to navigate and Spacebar to select
Find Files and Folders (AKA Search)
3D-Flip cycles through your standard applications (only available for Vista versions with Aero enabled)
Windows + Ctrl + Tab
Launches 3D-Flip but stays on the desktop so that you can scroll in directions
Displays Windows Sidebar (provided enabled)
Locks the computer (needs password to reactivate)
Tabs through applications on the taskbar
My daily work become faster after I've got used to the Windows shortcuts. Hopefully this list could help your lifealot easier too.
Win, →, →, →, Enter
Win, →, →, →, U
Win, →, →, →, R
Win, →, →, →, W
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Thursday, December 10, 2009 No comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Saturday, December 05, 20095comments:
နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိက ဖြူးဆရာတော်ကြီး၏ အန္တိမအဂိဈာပနကို ရေဝေးသုသာန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကထိက၊ ဓမ္မရက္ခိတ ဖြူးမဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာနှင့် ဖြူးမြို့ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၏ ဦးစီးပဓာန နယက ဆရာတော် အရှင် နရပတိ(ဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ၊ သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ)၏ အန္တိမဈာပနကို နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ တနင်္လာနေ့က ရေဝေးသုသာန်ရှိ သီးသန့်လောင်တိုက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ဖြူးဆရာတော်ကြီး၏ အန္တိမ ဈာပနာသဘင်သို့ မန္တလေးမြတောင်ဆရာတော် အရှင်သာသနာဘိဝံသ အပါအ၀င် နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိကများဖြစ်ကြသော သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဥာဏိသာရ၊ ပဲခူးဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ပညိဿရ၊ မှော်ဘီဓမ္မဒူတဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်ဆေကိန္ဒ၊ မှော်ဘီမြို့မင်္ဂလာကျောင်းဆရာတော် အရှင်သုမင်္ဂလ၊ ဖြူးဆရာတော်ကြီး၏ တပည့် တပါးဖြစ်သူ တွံတေးအရှင်ကုန္ဒက၊ ကိုးဘွဲ့ရဆရာတော် အရှင်အာစာရာလင်္ကာရ၊ စစ်ကိုင်း - ခင်မကန်ဆရတော် အရှင်ခေမိန္ဒ၊ စာရေးဆရာ ရွှေဘိုမင်းသုခ အရှင်ပညာဇောတ အစရှိသည့် ဆရာတော် အရှင်မြတ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အခမ်းအနားကို မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ၊ မိနစ် ၃၀ တွင် စတင်ခဲ့ပြီး မန္တလေး မြတောင်ဆရာတော် အရှင်သာနသဘိဝံသက သြ၀ါဒကထာ ဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူခဲ့ပြီး မှော်ဘီမြို့၊ မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဆရာတော် အရှင်သုမင်္ဂလက ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်းကို ဖတ်ကြားတော်မူခဲ့သည်။ ထို့နောက် သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဥာဏိသာရက ရေစက်သွန်းချအမျှပေးဝေကာ တွံတေးအရှင်ကုန္ဒက၊ စာရေးဆရာ ရွှေဘိုမင်းသုခ အရှင်ပညာဇောတ၊ ကျောက်ပန်းတောင်း ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း၊ တေးသံရှင် ဒေါ်ရီရီသန့်တို့က အစီအစဉ်အတိုင်း တေးထပ်၊ တပည့်များပင့်ဆောင်ရာသို့ လိုက်ပါရန် လျှောက်ထားလွှာတို့ကို ဖတ်ကြားပြီး ဖြူးဆရာတော်၏ ရုပ်ကလာပ်တော်ကို ဈာပနယာဉ်ပေါ်သို့ တပည့်သံဃာများက ထမ်းပိုးပင့်ဆောင်မူပါသည်။
ဖြူးဆရာတော်ကြီး၏ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ တောင်ငူမြို့ ရွှေဘိုကြီး စာသင်တိုက်၊ ရွှေမင်းဝံကျောင်း၊ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ၊ မှော်ဘီမြို့ မင်္ဂလာကျောင်း၊ အင်းစိန်ရွာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ အစရှိသည်တို့မှ သံဃာတော်များ ကြွရောက်ကြပြီး ဓမ္မမိတ်ဆွေအဖွဲ့၊ဓမ္မရောင်ခြည်အဖွဲ့၊ ဓမ္မမေတ္တာအဖွဲ့၊ သာသနရက္ခိတအဖွဲ့၊ ဓမ္မရသအဖွဲ့၊ ဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာအသင်း၊ သဒ္ဒါဓိကလူငယ်အဖွဲ့၊ မေတ္တာတံခွန်အသင်း အစရျိသည့် သာသနာရေးအသင်းအဖွဲ့များက လိုက်ပါပို့ဆောင်ပူဇော်ကြကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်တော်ကို ရေဝေးသုသာန်ရှိ သီးသန့်လောင်တိုက်တော်တွင် ညနေ ၅ နာရီ၊ ၁၀ မိနစ်ခန့်တွင် မီးသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သည်။ ဆရာတော်ကြီး၏ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ လိုက်ပါပို့ဆောင်သည့် မော်တော်ယာဉ်အရေအတွက်မှာ ဓမ္မရက္ခိတဖြူးမဟာစည်သာသနာရိပ်သာကျောင်းမှ စီးရေ ၂၅၀ ခန့်၊ ရေဝေးသုသာန်တွင် လာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေသည့် စီးရေ ၁၀၀ ခန့် စုစုပေါင်း စီးရေ ၃၅၀ ခန့်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်....
ဈာပနပုံတွေကို ဒီမှာ တင်လို့ အဆင်မပြေတဲ့အတွက် ဈာပနပုံတွေကို ကြည့်ချင်သူများအတွက် ဒီမှာပါ။
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, December 01, 20092comments:
အကြောင်းအရာက: ဘာသာရေး, မှတ်တမ်း
ဟိုးအဝေး ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်မိတယ်....
အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းမဲ့စွာ လင်းလက်နေလိုက်ကြတာ
ကြယ်တွေလိုများ ငါ့ဘ၀ ပြည့်စုံခဲ့ရင်.....
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Tuesday, December 01, 20095comments:
ပို့စ်ကို ရေးသားသူ yamin အချိန် Sunday, November 29, 20092comments:
အလောင်းတော်ကဿပ ပင်မလမ်းဖြစ်သော ရွှေဆံပင်လမ်းနှင့်ေ...
နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိက ဖြူးဆရာတော်ကြီး၏ အန္တိမအဂိဈာပန...